တိုင်းအီတလီကျောင်းသား Learn သင့်သ 8 Connector စကား
by ချာ Hale က
အီတလီပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာအသံဤ connector ကိုစကားလုံးများကိုသုံးပါ
"ငါသည်ကမ်းခြေကိုသွားကြိုက်တယ်။ ကျွန်မဖတ်ဖို့ကြိုက်တယ်။ ကျွန်မဖတ်ဖို့ကြိုက်တယ်အဆိုပါစာအုပ်များနက်နဲသောအရာဝတ္ထုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မဖတ်ဖို့ကြိုက်တယ်အခြားစာအုပ်တွေအချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုပါ။ "
သငျသညျအထကျစာကြောင်းများတစ်မူကွဲသုံးပြီးဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရန်သေချာနေစဉ်, သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရလိမ့်မယ်တစ်ခုခုနဲ့တူမခံစားရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုနေယျမသက်မသာ, ခြေတံရှည်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ 35 နှစ် regressed င့်နဲ့တူသူတို့ကအရည်အချင်းမပြည့်ခံစားရနှင့်သေသောသူတို့ကိုပြောဆိုမှုများရှိခြင်းကိုခံစားရန်အဘို့အခက်ခဲစေသည်။
သင်သည်သင်၏ပြောဆိုမှုများကိုပိုမိုအရည်ဖြစ်စေလျက်, ထို့ကြောင့်သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နေစဉ်, သူတို့ထဲကတဦးတည်း connector ကိုစကားလုံးများကို, ဒါမှမဟုတ်အတူတကွနှစ်ခုသီးခြားစာကြောင်းများချိတ်ဆက်စကားလုံးများကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား "နှင့်" သို့မဟုတ် "ဒါပေမယ့်", ဒါမှမဟုတ်သူတို့ "ကိုလည်း" သို့မဟုတ် "ထို့နောက်" ကဲ့သို့ဖိုင်လင့်များပါသည့်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တူသော Conjunction, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
1. ) အီး - ထိုအခါ
mi piace andare အတွက် spiaggia အီး leggere ။ - ငါကမ်းခြေကိုသွားဖတ်လို။
Puglia အတွက် Toscana အီးအတွက် Vorrei andare quest'estate ။ - ငါကဒီနွေရာသီ Tuscany နှင့် Puglia သွားချင်ပါတယ်။
mi un po '' di zucchero, del pane ထဲကကိုedella frutta ဝတ်ပြုကြလော့။ - ငါသကြားအနည်းငယ်, အခြို့သောမုန့်, ​​အချို့အသီးလိုအပ်ပါတယ်။
Vuoi un ရုပ်ရှင်အီးအထင်ကရနေရာများ un caffè prendere guardare? - သင်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုပြီးတော့နေတဲ့ကော်ဖီဖမ်းပြီးချင်ပါသလား
အကြံပြုချက်: "အထင်ကရနေရာများ" ကိုလည်း "အီးအထင်ကရနေရာများ dovremmo andare အယ်လ်ရုပ်ရှင်ရုံကဲ့သို့စာပိုဒ်တိုများတစ် sequence ကိုပေးသည်တဲ့အကြီးအစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ - ပြီးတော့ကြှနျုပျတို့သညျ "ရုပ်ရှင်သွားသင့်ပါတယ်။
2. ) pero / ma - ဒါပေမယ့်
Vorrei venire အတွက် centro con või, ma oggi ဟို troppe cose da ခ။ - ငါသင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူမြို့လယ်သွားချင်ပေမယ့်ယနေ့ငါလုပ်ဖို့လည်းအရာများစွာကိုရှိသည်။
mi piace andare spiaggia အတွက် pero မဟုတ်တဲ့မိုင် piace prendere il ဝါး။ - ငါကမ်းခြေကိုသွားကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါ suntan လိုကြပါဘူး။
Volevo venire တစ် trovarti, ma ဟို perso il treno! - ငါသည် လာ. ထိုငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ခဲ့ပေမယ့်ငါရထားလွဲချော်။
ဟို pero E troppo noioso တစ် leggere questo libro provato ။ - ငါသည်ဤစာအုပ်တွင်ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အရမ်းပျင်းစရာပါပဲ။
3. ) အို / Oppure - ဒါမှမဟုတ်
Preferisci mangiare il pesce ဏ la carne? - သင်ငါးသို့မဟုတ်အသားကိုစားရန်ပိုနှစ်သက်ပါသလား?
ti piace leggere romanzi oppure gialli? - သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုသို့မဟုတ်နက်နဲသောအရာဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးလိုသလား?
Vuoi တစ်ဦးရိုးမား oa Tivoli andare? - သင်ရောမမြို့သို့မဟုတ် Tivoli သှားဖို့လိုသလား?
4. ) Anche - ဒါ့အပြင်
mi piace anche leggere ။ - ငါသညျလညျးကိုဖတ်လို။
"anche" ၏နေရာချထားသာကြိယာ "leggere" မတိုင်မှီဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ဟို anche un libro di grammatica comprato ။ - ငါကိုလည်းသဒ္ဒါစာအုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဒီနေရာတွင် "ho" နှင့် "comprato" နှင့်၎င်း၏နေရာချထားအကြား "anche" နေရာနိုင်ဝါကျ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြမှဆောင်ရွက်ပါသည်။
Vorrei anche un contorno ။ - ငါသည်လည်းတစ်ဦးအခြမ်းချင်ပါတယ်။
Anche io ။ - ကိုယ်လည်းပဲ။
5. ) Che - ဒါက
Preferisco che andiamo အယ်လ်မြင်း invece che piscina ၌တည်၏။ - ကျနော်တို့အစားရေကူးကန်၏ပင်လယ်သို့သွားရကြောင်းကြိုက်တတ်တဲ့။
non pensi che faccia troppo caldo? - သင်ကအရမ်းပူရဲ့စဉ်းစားကြသည်မဟုတ်လော
Silvia E un'insegnante che si aspetta molto dagli studenti ။ - Silvia သူမ၏ကျောင်းသားများအနေအများကြီးမျှော်လင့်တဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။
6. ) Quindi - ဒီတော့ / ထိုအခါ
Oggi ဟို molto da ခ, quindi မဟုတ်တဲ့ posso uscire con või။ - ယနေ့ငါလုပ်ဖို့အများကြီးရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူထွက်မသွားနိုင်ပါ။
non မိုင် piace la neve, quindi မိုင် trasferisco ဟာဝိုင်ယီ alle ။ - ငါမိုဃ်းပွင့်ကိုကြိုက်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ငါဟာဝိုင်ယီကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပေါ့။
Amo la cultura italiana, quindi imparo l'Italiano ။ - ငါအီတလီယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်, ဒါကြောင့်ငါအီတလီသင်ယူတယ်။
7. ) Allora - ဒီတော့ထို့နောက်ကောင်းပြီ
Allora, racconto cos'è successo ti ။ - ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ငါ့ကိုသငျသညျပြောပြပါရစေ။
ci vediamo allora! - ကျနော်တို့ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်!
Allora, che facciamo? - ကောင်းပြီ, အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြသနည်း
8. ) Cioè - ဒါကဖြစ်ပါသည်
Faccio la scrittrice, cioè scrivo articoli su s'imparano le lingue straniere လာကြ၏။ - ငါနိုင်ငံခြားဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားသောစာရေးဆရာ, ပေါ့။
la Mia အော်တို appartiene alla class ယူရို 6, cioè quella Dell အော်တို meno inquinanti ။ - ငါ့ကားယူရို6လူတန်းစားပိုင်, သောတဦးတည်းကိုပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေပါတယ်။
Italia fra ကြောင့် mesi, cioèတစ် giugno အတွက် Vado ။ - ငါတကယ်ဇွန်လထဲမှာနှစ်လအတွင်းအီတလီကိုမသွားဘူး။
Shizukani - ရိုးရှင်းသောဂျပန်စကားစုများ
Au CAS OU - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
ကလေးများအကြောင်း Talking များအတွက်စပိန်စကား
Filler စကားနှင့်ဆိုသံ pause
အဘိဓါန် Mandarin- တရုတျထဲတွင်လျော်လျှော့စျေးအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဓိပ်ပာယျ, မူလအစနှင့် '' Gringo '' အသုံးပြုခြင်း
Le jour J ကို - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
ပြင်သစ် Menu ကို Read လုပ်နည်း
ခြေ Hepburn ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဲဒီ 20 အလွန် "Punny" လှေအမည်များထဲက Check
ဂျာမန်ဘာသာစကားစာမေးပွဲကျွမ်းကျင် - အပိုင်း III ကို - အဆင့် B1 ကို CEFR
ဆာဦး Edmund ဟီလာရီ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဘယ်အရာကိုရေနံအလေးချိန်တစ် High-မိုင်အကွာအဝေး Nissan ကား Maxima အကောင်းဆုံးလား?
2009 Harley-Davidson V-လှံတံကြွက်သားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဘီလ် O'Reilly ရဲ့ "kill" စီးရီးအတွက်5အကြီးမားဆုံးအမှား
'' အဆိုပါမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း '' အက်ဥပဒေ 1
ချီးမွမ်းခြင်းကိုဒါမှမဟုတ်ချော့မော့? 15 Quotes အတူ Difference ကိုပြောပြပါဖို့သင်ယူပါ
တစ်ကွေး Cue Stick Shaft ဖြောင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Illocutionary အင်အားစု (မိန့်ခွန်း)
ဘေ့အပေါ်နုတ်မ Chord Play မှလေ့လာပါ
ကော်မရှင်များတွက်ချက် - ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်း
နပိုလီယံစစ်ပွဲများ: Fuentes က de Oñoro၏တိုက်ပွဲ
တရားမဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှင်းလင်းချက် - Profits တွေ & ဆင်းရဲမွဲတေမှု, လူမှုဖူလုံရေး & ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး